(src)="1.2"> Както много хора досега отбелязаха , светътeдостигнал критична точка по отношение на темата свобода в интернет .
(src)="3.1"> С тази мисъл , различни групи се събраха , за да съставят Декларация за Свободата в Интернет , като Global Voices Advocacy принадлежи към първите подписали се .
(src)="3.3"> По-долу можете да намерите оригиналния текст на декларацията .
(trg)="3.4"> ဒီနေရာမှာ ကြေညာစာတမ်းကို လက်မှတ်ထိုး ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။
(src)="3.4"> Можете да подпишете декларацията тук .
(src)="3.5"> Също така можете да участвате и чрез други организации , като например EFF , Free Press , Access и дори Cheezburger .
(trg)="5.5"> ပို ၍ ဆန်းသစ်ပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းနှင့် ပို ၍ ပွင့် လင်းမြင်သာသော လူမှုပတ်ဝန်းကျင်များကို သယ်ဆောင်လာနိုင်လိမ့် မည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။
(trg)="7.2"> ၄င်းတို့နှင့် ပတ်သက်၍ သဘောတူကြ ၊
(trg)="9.1"> ကြေညာချက ်
(src)="15.2"> Не блокирайте никакви нови технологии и не наказвайте иноваторите за действията на потребителите на техните продукти .
(src)="1.2"> Тази статия е част от нашето специално покритие на Либийската революция 2011.
(trg)="6.1"> ဘန်ဟာဇီမှ အာမက်ဆာနယ်လာက ဆန္ဒပြသူများ ကိုင်ဆောင်ကြာသော ဆန္ဒပြဆိုင်းဘုတ်အချို့ကို တွစ်တာပေါ်တွင်မျှဝေခဲ့သည်။
(src)="8.1"> Няколко снимки от протеста , споделени от Санаала :
(trg)="7.1"> အာမက်က တွစ်တာစာတိုပို့ခဲ့သည်မှာ ၊
(trg)="8.6"> ဘန်ဟာဇီ ဆန္ဒပြသူတစ်ဦး ကိုင်ဆောင်ထားသော စာတန်းတစ်ခု ၊
(src)="9.1"> Тази статия е част от нашето специално покритие на Либийската революция 2011.
(src)="1.1"> Да си спомним за киргизката жена , която осинови 150 деца по време на обсадата на Ленинград
(trg)="1.1"> ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်အတွင်း ကလေးငယ်၁၅၀ ကို မွေးစားခဲ့သူ ကာဂျစ်အမျိုးသမီးကို အောက်မေ့အမှတ်ရခြင်း
(src)="1.3"> Борис Кудояров , RIA .
(trg)="1.3"> Boris Kudoyarov , RIA .
(src)="4.1"> По онова време тя току що е била избрана за председател на селския съвет .
(trg)="4.1"> ထိုအချိန်တုန်းက သူမသည်သူမ ၏ ကျေးရွာကောင်စီ ၏ ခေါင်းဆောင်အဖြစ်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံခဲ့ရကာစဖြစ်သည်။
(src)="5.1"> Снимка взета от Уикипедия .
(trg)="5.1"> Wikipedia မှ ကူးယူ ဖော်ပြသည်။
(src)="6.1"> Алтибасарова определила възрастта на децата и им дала първи имена .
(trg)="6.1"> အယ်တီဘာဆာရိုဗာ သည်ကလေးများ ၏ အသက်အရွယ်တွေကို ဆုံးဖြတ်ပေးပြီး သူတို့ကို နာမည်များပေးခဲ့သည့် ။
(src)="6.2"> Водейки екип от хора , които се грижели за децата , тя ги наблюдавала по техния път до израстването им , когато всяко от тях напуснало дома в търсене на работа или образование в различни части на Съветския съюз .
(trg)="6.2"> ပြုစု စောင့် ရှောက်သူများပါဝင်သည့် အဖွဲ့ကို ကိုယ်တိုင်ကြီးကြပ်ကာ သူမသည်ကလေးတွေ လူလားမြောက်ပြီး ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုအတွင်းရှိ ဒေသမျိုးမျိုး ၌ အလုပ်လုပ်ရန်သို့မဟုတ်ပညာသင်ကြားရန်အသီးသီးသို့ထွက်ခွာသွားသည်အထိ ပြုစုပျိုးထောင်ပေးခဲ့သည်။
(src)="12.3"> Надявам се да е успяла да възпита децата си така , както е била възпитана самата тя .
(trg)="8.4"> အသက်၁၆ နှစ်အရွယ်မှာ တော့( ခ်) တိုဂွန်အယ်တီဘာဆာရိုဗာ ၄င်းကလေးများ ၏ မိခင်များ နေရာမှ ဝင်ကာ ကလေးများကို ဂရုစိုက်မှု စေတနာ ၊
(src)="12.4"> Като истински хора !
(trg)="8.6"> နွေးထွေးမှုတို့ကို ပေးစွမ်းခဲ့သည်။
(src)="12.5"> В същото време жена , твърдяща , че е дъщеря на Алтибасарова , благодари на хората :
(trg)="8.9"> နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးဟာ သူမ ၏ အသုဘကုန်ကျစရိတ်များအတွက်သုံးစွဲရန်ကာဂျစ်ငွေ တစ်သိန်း ( ဒေါ်လာ ၁၇၀၀ ခန့် ) ကို ပေးအပ်ခဲ့သည်။
(src)="12.7"> Благодаря ви за подкрепата и милите думи ! ! !
(trg)="9.8"> သင်၏ အထောက်အပံ့နှင့် ကြင်နာသော စကားများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
(src)="12.8"> Благодаря ви , ленински деца , за милите спомени ! ! !
(trg)="9.9"> လီနင်ဂရတ်၏ ကလေးများနှင့် သူတို့၏ ကျင်နာတဲ့အမှတ်တရဖွယ်ရာများကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
(trg)="1.1"> ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများရှိ သေဆုံးမှု ၏ အဓိက အကြောင်းတရားသည်သင့် ကို အံ့အားသင့် စေမည ်
(trg)="2.2"> com ၌ ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
(trg)="4.1"> ( က ) အဟာရ မမျှတမှု နှင့် အာဟာရချို့တဲ့မှု
(trg)="5.1"> ( ခ ) တီဘီ ၊
(trg)="7.4"> ရေထုနှင့် လေထု ( အိမ်တွင်း နှင့် ပြင်ပ ပတ်ဝန်းကျင်နှစ်မျိုးလုံး ) နှင့် ထိတွေ့နေထိုင်ခြင်းတို့သည်၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်ယင်းနိုင်ငံများတွက်လူဦးရေ ၈ .
(trg)="8.2"> ၄ သန်းသည်၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံး ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုကြောင့် သေဆုံးသူဦးရေ စုစုပေါင်း ၉ သန်း ဝန်းကျင်ထဲမှ အရေအတွက်ဖြစ်သည်။
(trg)="8.4"> ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများတွင်အများကြီး သက်ရောက်နေသော ပြဿနာ တစ်ခုဖြစ်သည်။
(trg)="9.1"> အလုံးစုံ ခြုံကြည့် လိုက်မည်ဆိုပါက ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့( World Health Organization ) စာရင်းဇယား အရ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်လူဦးရေ ၅၆ သန်း သေဆုံးသည်ဟု ဆိုသည်။
(trg)="10.5"> အခြား ၁ သန်း ဝန်းကျင်မှာတော့ညစ်ညမ်းရေ ၊
(trg)="10.6"> မြေဆီလွှာ နှင့် ဓာတုပစ္စည်းများကြောင့် သေဆုံးကြသည်။
(trg)="10.7"> ၈ သိန်း ၄ သောင်း ဝန်းကျင်မှာတော့ဆိုးရွားသော သန့် ရှင်းမှု ရေဆိုးနုတ်စနစ်များ ၏ အခြေအနေကို မလွန်ဆန်နိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
(trg)="11.1"> ထို နှစ်( ၂၀၁၂ ) ထဲတွင်ပင်လူ ၆၂၅၀၀၀ သည်ငှက်ဖျားကြောင့် သော်လည်းကောင်း ၁ .
(trg)="14.1"> ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုဟာ တိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်လျှင်မြန်စွာ သေစေနိုင်သည်မှာ ရှားပါးသည်ကို သတိပြုမိဖို့အရေးကြီးပါသည်။
(trg)="14.4"> ကင်ဆာ ၊
(trg)="14.6"> ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုသည်ဓာတ်ကူပစ္စည်းတစ်ခု အဖြစ်နေပြီး ၊
(trg)="14.12"> သို့သော်ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုသည်ထို အန္တရာယ်အချက်များ ၏ ရှင်ဘုရင်ဖြစ်သည်။
(src)="15.1"> Всеки ден се будите на мръсния под в колиба до останките от строеж .
(trg)="15.1"> ၄င်းသည်မည်မျှ ဆိုးဝါးနိုင်သည်ကို မြင်ယောင်ကြည့် ဖို့ခဲယဉ်းပါသည်။
(trg)="16.2"> သင်၏ ခင်ပွန်းသည်ဆိုးဆိုးရွားရွား လည်ပတ်နေသော ပိုးသတ်ဆေးစက်ရုံထဲတွင်ဓာတုပစ္စည်းများကို စီသော အလုပ်ကို တစ်ပတ်လျှင်နာရီ ၇၀မျှ အလုပ်လုပ်သည်။
(trg)="16.3"> လတ်တလော သူ အိမ်ပြန်လာတော့သွေးချောင်းဆိုးသည်။
(trg)="16.5"> ဒါကြောင့် သင်သူ့ကို ရပ်တန့် ဖို့ပြောချင်ပေမဲ့လည်း သင်မည်သို့ပြောနိုင်မလဲ ။
(trg)="17.1"> ဤသို့နှင့် သင်သည်သင်၏ ပလပ်စတစ်ရေပုံးကို ဆွဲကာ အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ရေကန်ကို သွားလေသည်။
(trg)="17.3"> သင်သည်ပိတ်ပါးရေစစ်ဖြင့် စစ်သော်လည်း သိပ်များများ ကောင်းမလာချေ ။
(trg)="17.4"> ဤအတောအတွင်း သင့် ၏ ဆင်းရဲသောရပ်ကွက်နားရှိ အစိုးရက လတ်တလော ချိတ်ပိတ်ထားသော စက်ရုံသည်ပြန်လည်လည်ပတ်နေသည်- သို့သော်ညဥ့် အခါမှသာ လည်ပတ်သည်။
(trg)="17.5"> ယင်း ၏ မီးခိုးခေါင်းတိုင်သည်မီးခိုးထူများ အုပ်လိုက်မှုတ်ထုတ်နေပြီး သူတို့ဘာတွေကို ရှို့နေသလဲကို သင်မည်သို့မျှပင်မသိနိုင်။
(trg)="17.6"> ပြီးခဲ့သည့် အပတ်က သင်၏ အကြီးဆုံးကလေးသည်ညဘက်တွင်ချောင်းပြန်ဆိုး လာပြန်သည်။
(trg)="17.7"> သင်၏ တခြား ကလေးများအားလုံးကတော့ချူချာနေပြီး အခြေခံကျပြီး လွယ်ကူသော အယူအဆ များကိုပင်နားလည်သင်ယူဖို့နှေးကွေးသည်။
(trg)="17.8"> မိတ်ဆွေများ သို့မဟုတ်မိသားစုဆွေမျိုးများသည်လည်း သင့် ကို မည်သို့မျှ မကူညီနိုင်။
(src)="18.5"> Всяко село има същите проблеми .
(trg)="17.9"> အဘယ့် ကြောင့် ဆိုသော်သင့် ရပ်ကွက်အတွင်း လူတိုင်းနီးပါးသည်တူညီသော ပြဿနာများ ရှိနေကြေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
(src)="19.1"> Как можем да разрешим този проблем ?
(trg)="19.2"> မျှော်လင့် ချက်လည်းမရှိ ဖြစ်သည်။
(src)="20.1"> Както икономиката ни е свързана , така и замърсителите се пренасят и разпространяват .
(trg)="19.4"> ရှိသမျှ အကုန်ကောက်သိမ်းပြီး တခြားမြို့သို့ပြောင်းသွင်းရန်မှာလည်း မလွယ်၊
(src)="20.2"> Замърсеният въздух от Китай може да бъде измерен и в други държави .
(trg)="19.5"> လက်ရှိ အတိုင်းအတာအထိ ရောက်အောင်အချိန်အများကြီးယူပြီး မနည်း ထူထောင်ခဲ့ရသည်မဟုတ်လား ။
(src)="21.3"> Западът успешно се справя с пречистването на околната среда и могат да пренесат този модел и към развиващите се страни .
(trg)="21.1"> ကျွန်တော်တို့၏ စီးပွားရေး စနစ်များသည်တကမ္ဘာလုံးနှင့် ချိတ်ဆက်သက်ရောက်နေသလို ၄င်းမှ ထုတ်ပေးသော ညစ်ညမ်းမှုများသည်လည်း ထို့အတူပင်ဖြစ်၏ ။
(src)="22.1"> От изключителна важност е осигуряването на замърсяването да бъде включено в Целите на хилядолетието за устойчиво развитие на ООН .
(trg)="21.2"> တရုတ်နိုင်ငံမှ ထုတ်လွှတ်သော ညစ်ညမ်းသောလေထုကို ယခု အခြား နိုင်ငံများတွင်တိုင်းတာတွေ့ရှိပြီ ဖြစ်သည်။
(src)="23.3"> В сегашното предложение , замърсяването на околната среда е включено в целите на здравеопазването , но не и като отделно звено .
(trg)="25.1"> ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ရည်မှန်းချက်များ ( United Nations ’ Sustainable Development Goals ) တွင်ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှု ပြသနာကို ပါဝင်အောင ်
(src)="23.4"> Точка 3.9 гласи следното - намаляване на смъртността причинена от замърсяване .
(trg)="26.3"> ထိုစာတမ်း ( ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်အပိုဒ်ခွဲ ၃ .
(src)="24.1"> Световния алианс за здравето и замърсяването е една от малкото организации , която спомага развиващите се страни да се справят с проблемите .
(trg)="26.4"> ၉ ) သည်လောလောဆယ်တွင်ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှု မည်သည့် အမျိုးအစားထံမှမဆို ဖြစ်ပေါ်လာသော သေခြင်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုကို လျှော့ချရန်တောင်းဆိုထားသည်။
(src)="25.1"> Новите технологии и експертиза за справяне с проблемите , прилагани в развитите страни , могат да бъдат приложени и в държавите с малък и среден доход .
(trg)="28.1"> ဤ ကျန်းမာရေးနှင့် စီးပွားရေး ခြိမ်းခြောက်မှုတို့ကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်နည်းပညာနှင့် အသိပညာများသည်ချမ်းသာကြွယ်ဝသော နိုင်ငံများတွင်ရှိပြီးဖြစ်သည်။
(src)="25.2"> Проблемът със замърсяването на околната може да бъде разрешен и да спаси бъдещите поколения .
(trg)="29.1"> အဓိက ဆိုလိုသည်မှာ ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုသည်ရှောင်လွှဲ ၍ မရသော အရာ မဟုတ်။
(src)="26.1"> Ричард Фюлер е председател на Pure Earth ( Blacksmith Institute ) и основател на Световния алианс за здравето и замърсяването .
(trg)="29.2"> ယင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ တသက်တာအတွင်းမှာ ဖြေရှင်း ၍ ရသော ပြဿနာတစ်ခုသာ ဖြစ်သည်။
(src)="26.2"> Може да го следите в Туитър на @BlacksmithInst .
(trg)="30.2"> သူသည်@ BlacksmithInst လိပ်စာဖြင့် twitter သုံးသည်။